Madaxda Soomaalida oo u wada hambalyeeyay Geelle | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxda Soomaalida oo u wada hambalyeeyay Geelle
Madaxda Soomaalida oo si isku mida hambalyo ugu diray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo markii 5 -aad ku guuleystay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii shanaad ku guuleystay xilka madaxweynaha Jabuuti.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo inta badan hoggaamiyayaasha Xisbiyada mucaaradka ayaa hambalyo udiray madaxweyne Ismaaciil oo mar shanaad noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti.
Mas'uuliyiinta ayaa si isku mida hambalyo ugu diray Geellaha Jabuuti. Wasiirka Arrimaha gudaha Jabuuti oo ku dhawaaqay Natiijada doorashadii Madaxtinimo ee ka dhacday Jimcihii, waxaana Madaxweyne Ismaciil uu ku guuleystay 98.41% codadkii la tiriyay halka Murashixii la tartamayey uu halay 1.59%.
Geelle ayaa lagu xantaa inuu yahay shakhsi awoodda waddanka Jabuuti xoog ku haysta, balse isaga ayaa isku arka inuu yahay halyeey Jabuuti wax badan taray, waana sababta ay hambalyo isku mida ugu direen madaxda Soomaalida ee isku khilaafsan doorashada dalka.